कार्तिक ३, २०७६ ११:३०:३५
आश्विन ५, २०७६ हेटौंडा खबर
साहो फिल्मलाई समीक्षकहरूले दुत्कारेको र दर्शकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको भए पनि फिल्मले लगभग ४०० करोड भारु कमाएको छ । साहोका कारण प्रभास भारतीय फिल्म उद्योगका सबभन्दा बढी पैसा लिने अभिनेता बनेको चर्चा छ ।
नेगेटिभ रिभ्यु आएपछि साहोको व्यापारमा असर परेको खबर आएको थियो । त्यसैले गर्दा प्रभासले चाहेको जति पारिश्रमिक नपाएको कुरा थियो । तर यो सब हल्ला मात्र भएको रिपोर्ट आएको छ ।
एक अन्लाइन पोर्टलका अनुसार, साहोको सफलतापछि प्रभासको फीस ह्वात्तै बढेको छ । फिल्मका लागि प्रभासले आफ्नो फीस २० प्रतिशतभन्दा पनि कम गरेका थिए । फिल्मको बजेट १५० करोडबाट बढेर ३५० करोड भारु पुगेपछि आफ्नो फीस घटाएको उनले बताए । निर्माताहरूसँग उनले पूरा फीस असुलेको भए फिल्मको बजेट बढेर उनीहरूलाई बोझ हुने भएकाले आफूले फीस घटाएको प्रभासले पत्रकारलाई बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, आश्विन ५, २०७६, १२:०९:००
प्रदीप र अनमोलको भिडन्त ?
हट अवतारमा रिया चक्रवती
आश्विन २८, २०७६ हेटौंडा खबर
बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवती आफ्नो बोल्ड फोटोसुटका कारण चर्चामा रहने गर्छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षीले कसरी घटाइन् ३० किलो तौल ?
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आजभोलि निकै फिट देखिन्छिन् । तर, एउटा समय थियो, उनी ९० किलोको थिइन् । उनले अहिले त करिब ३० किलो तौल घटाएकी छिन् । खासमा तौल घटाएर नै उनले फिल्ममा इन्ट्री मारेकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्